Shina tsy azo itokisana PVC fonon-tanana fanamboarana sy trano | Zhongmaohua
Fandraisana tanana PVC
Fantsakanana vita amin'ny plastika azo itokisana polymer dia fonon-tanana plastika vita amin'ny plastika, izay vokatra mitombo haingana ao amin'ny indostrian-tànana fiarovana. Ny mpiasa ara-pitsaboana sy ny mpiasan'ny indostrian'ny sakafo dia manaiky ity vokatra ity satria ny fonon-tanana PVC dia mahazo aina, mora ampiasaina, tsy misy menaka vita amin'ny voajanahary, ary tsy hiteraka mahazaka fanehoan-kevitra.
Dingana famokarana vokatra
Fanaraha-maso ny vatan-tany → fampiasam-bokatra sela fitrandrahana → fanaraha-maso → fanaraha-maso → fitahirizam-bokatra → fitehirizam-bokatra → fanaraha-maso → fampiasa an-tserasera → fandatsahana → famotehana → fanintsanana stereotype → famoronana plastika → famelezana ny hafanana sy famatsiam-bokatra → fanesorana ny PU na vovoka mando… milentika → famotehana → Hemming → mialoha ny famoahana → Fahatsiarovana → Vulcanization → Fanaraha-maso → fonosana → fitahirizana → fitahirizana → Fanaraha-maso → Fivarotana sy fandefasana.
Sefy sy fampiharana
Ny asa an-trano, elektronika, simika, rano, fitaratra, sakafo sy ny fiarovana ny orinasa hafa, hopitaly, fikarohana siantifika ary indostria hafa; ampiasaina betsaka amin'ny fametrahana semiconductors, famoronana elektronika ho marim-pototra ary fampandehanana ny fitaovam-pamokarana metaly miraikitra, fametrahana ny teknolojia avo lenta ary famoronana Discugging Disc, fitaovana mihetsika, metatra LCD, boaty famokarana circuit, vokatra optika, laboratoara, hopitaly, salon mahafinaritra sy ny kianja hafa.
Fandraisana tanana PVC (3 sary)
Toerana madio toy ny semiconductors, microelectronics, LCD mampiseho ary zavatra hafa mora tohina, ara-pitsaboana, farmaseutika, injeniera biolojika, sakafo sy zava-pisotro, sns.
1. Mahazo haingotra, akanjo lava, tsy miteraka fihenjanana amin'ny hoditra. Mitaiza mivezivezy amin'ny ra.
2. Tsy ahitana sôkôlaina amina ary zavatra manimba hafa, ary mahalana no miteraka alikaola.
3. Ny tanjaka mahery vaika, ny fanoherana puncture, ary tsy mora vaky.
4. Fametahana tsara, no mandaitra indrindra amin'ny fisorohana ny vovoka tsy ho any ivelany.
5. Ny fanoherana simika tsara sy ny fanoherana ny pH sasany.
6. Fangaro tsy misy silicone, miaraka amina antistatic sasany, izay ilaina amin'ny famokarana indostrian'ny elektronika.
7. Ny farany ambany amin'ny sisan'ny simika ambonin'ny, ny ambany amin'ny atiny ion, ary ny votoatin'ny singa kely, mety ho an'ny tontolo iainana madio.
Ity vokatra ity dia tsy manana tànana havia sy havanana, azafady mifidiana ny fonon-tànana mety ho an'ny laharan'ny tànako manokana;
Rehefa mitafy fonon-tànana, aza manao peratra na akora hafa, tandremo ny manamboatra fantsika;
Ity vokatra ity dia voafetra amin'ny fampiasana iray; aorian'ny fampiasana dia azafady atao ny manala azy ho toy ny fako ara-pitsaboana mba hisorohana ny mpandoto ny fandotoana ny tontolo iainana;
Voarara mafy ny manala mivantana ny hazavana matanjaka toy ny tara-masoandro na ny fatra amin'ny ultraviolet.
Fomba fitahirizana sy fomba fiasa
Tokony hotehirizina ao amin'ny trano fitehirizana mangatsiaka sy maina izany (ny mari-pana ao anaty dia ambanin'ny 30 degre ary ny hamandoana havana akaiky kokoa noho ny 80%) eo amin'ny talanty 200mm miala amin'ny tany.